Didier Raoult: “Waa inaan joojinno argagaxa dadka! "- SANTE PLUS MAG - TELES RELAY
Didier Raoult: “Waa inaan joojinno argagaxa dadka! "- CAAFIMAAD PLUS MAG
Ku wajahan Laurence Ferrari, gudaha La Matinale de CNews, Agaasimaha Guud ee IUD Méditerranée Infection, Professor Didier Raoult, kala furfuray dhibaatada coronavirus. Khabiirka, waa wax aan macquul ahayn in la sii wado in lagu argagax geliyo dadweynaha ogeysiisyada dagaalka.
Sida laga soo xigtay borofisar Didier Raoult, waa inaan joojinno argagaxa dadka. Xigasho: ladepeche
Isku qaadsiinta ama fayrasyada kala duwan?
Intii lagu guda jiray wareysigan, Professor Raoult wuxuu marka hore ka hadlay mawduuca ku saabsan noocyada kiisaska "dib-u-qaadista". Khabiirka cudurada faafa, dib-u-soo-kabashada ayaa markii hore lagu qeexay ka dibna waxaa la ogaaday in fayrasku ka duwan yahay. Mawduucan, wuxuu sharxayaa inaysan ahayn su'aal dib u soo noqosho laakiin waa cudur kale oo faafa, isagoo intaa ku daray in kiisaska cusub ee la ogaaday ay ugu wacan yihiin fayrasyo ​​ka duwan kuwii lagu arkay bilihii Maarso iyo Abriil. Professor-ka, ma aha su'aal dib-u-soo-noqosho laakiin waa xasaanad la xukumay oo aan ku filneyn in laga ilaaliyo fayrasyada wax yar ka duwan.
"Waa inaan joojinnaa war murtiyeedka dagaalka"
Marka la eego, saynisyahanku wuxuu tilmaamayaa ogeysiisyada argagaxa leh ee ku saabsan fayraska. Wuxuu ku adkeysanayaa baahida loo qabo in la joojiyo argagaxa dadka iyo in la joojiyo war murtiyeedka dagaalka. " Kama cabsi gelin kartid dadka sanad dhan geerida dabeecaddan », Wuxuu ku adkeysanayaa. Waa inaan is dejino oo aan adeegsanno dariiqooyinka ku habboon caawinta iyo daryeelka iyadoo la horumarinayo aaladaha kormeerka fog. Saynis yahanka, xitaa haddii cudurku uusan libdhin, waa inaan joojino sii deynta dagaalka annagoo dhahayna dhammaantayo waan dhimanaynaa, innagoo rumaysanna inaysan caafimaad qabin oo ay jiri doonaan dhimasho siyaado ah oo loo geysto cudurada maskaxda ama cilmu-nafsiga.
Aragtidiisa ku saabsan tallaalka
Mawduucan, Professor Raoult wuxuu cadeynayaa in tallaal kasta ay lagama maarmaan tahay in la falanqeeyo halista iyo faa'iidada. Ku darista dadka halista sare leh ee da'doodu ka weyn tahay 75, faa'iidada ayaa ka weynaan doonta halista. Macnaha halkan, borofisarku wuxuu qirayaa inuu haysto doorbidida tallaalka Shiinaha marka la barbardhigo kuwa ku saleysan messengerka RNA. Marka la eego, saynisyahanku wuxuu ku doodayaa in tallaalka Shiinaha uu yahay mid macquul ah oo u oggolaanaya in loola macaamilo noocyada qaab macquul ah.
Iyo dib u xakamaynta?
Marka la eego, dhakhtarka virologist wuxuu qeexayaa in "su'aasha dhabta ah" ay ahayd "in la ogaado sida loo ogaado dadka wanaagsan" iyo sida "loogu sheego inaadan tagin oo la helo dad taban". Sida lagu daabacay maqaal uu qoray DEPECHE, waxaa xusid mudan kuwa nool dhaleeceynta borofisarka ee ku saabsan xabsi cusub. Wuxuu aaminsan yahay inaan sameyn doono " qofwalba waalan ". Wuxuu intaas ku daray, si kastaba ha noqotee, in sababaha da'da iyo miisaanka culus la rumeysan yahay inay sabab u yihiin xumaanshaha xaaladda caafimaad ee Faransiiska. Is afgaranwaaga ku saabsan xakamaynta in la joojiyo aafada, ayuu borofisarku si bayaan ah ugu dhawaaqay. Sida laga soo xigtay isaga, waxay noqon kartaa wax aan macquul ahayn in loo soo bandhigo dadweynaha si ay ugu noolaadaan gebi ahaanba qaybinta inta ka hartay taariikhda aadanaha. Cawaaqibta nafsadeed waxay noqon doontaa masiibo.
Haysashada Faransiiska: Suuragal ma tahay in laga fogaado?
Intii lagu guda jiray shirkii jaraa'id ee Febraayo 18, Olivier Véran, Wasiirka Caafimaadka ayaa ku dhawaaqay in " ma ahan waqtigii lagu nasto ". Xaaladda caafimaad ayaa weli ah mid adag oo wasiirku wuxuu jeclaan lahaa inuu u digo Faransiiska. Si kastaba ha noqotee, Vittoria Colizza, oo ah agaasimaha cilmibaarista ee Inserm, ayaa carabka ku adkeeyay in heerka wasakhda ay hoos u dhacday marka loo eego tii la duubay dhamaadka xabsigan labaad.
Marka laga hadlayo dib u xakamaynta suurtagalka ah, Olivier Véran wuxuu cadeynayaa in dowladdu ay sameyneyso dadaal kasta oo lagama maarmaan ah si looga fogaado. Dhinaca kale, wuxuu ku boorinayaa dadweynaha inay feejignaadaan iyadoo la ixtiraamayo astaamaha caqabadaha iyo in si weyn loo dhiirrigeliyo shaqada telefoonka.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.santeplusmag.com/didier-raoult-il-faut-arreter-de-terroriser-les-gens/
Hindiya: Geeddi-socodkii Kala-bixinta Shiinaha iyo Hindida ee Bariga Ladakh oo la dhammaystiray, ayuu yidhi Rajnath Singh | Wararka Hindiya
Anthony Fauci: Donald Trump wuxuu "nasiib badnaa" inuu ka badbaado Covid-19